မေး. သမီး ပုံမှန်အမြဲရာသီမှန်ပါတယ်။ တစ်လတစ်ခါ ၃ရက်ပါ။ အဖြူလည်း မဆင်းပါဘူးရှင့်။ ရာသီကတော့ နှစ်ရက်လောက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်လလုံးပျောက်ပြီး မတ်လမှပြန်ပေါ်ပါတယ်။ အခုကျတော့ ဧပြီလရော မေလရောပျောက်နေပြန်ပါတယ်။ ထပ်ပဲစောင့်ရမလား၊ ဆေးခန်းပြရတော့မလား အကြံပေးပါဦးနော် ဆရာ။ အပျိုဖော်ဝင်ခါစကတော့ တစ်လလောက်ထိန်တာဖြစ်ဖူးပါတယ်။...
သားအိမ်ထုတ်ထားတဲ့အခါ . . .
မေး ။ သားအိမ်ထုတ်ထားတဲ့သူက သွေးဆုံးရင် ခံစားရတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားရသေးလားရှင်။ Daw Myat Noe Khin (FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ သားအိမ်လည်း ထုတ်တယ်၊ သားဥအိမ်...
သားအိမ်ထူခြင်း (Endometrial hyperplasia)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁။ ဆရာရှင့် အရေးတကြီးဆုံးဖြတ်ရမှာမို့ ဆရာရဲ့ပြန်စာကို မျှော်နေပါတယ်။ ကျွန်မအသက်(၄၆)ပါ။ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာအထိ ရာသီမှန်မှန်လာပါတယ်။ နေ့ရက်မမှန်တာပဲရှိပါတယ်။ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီမှာ ရာသီမလာပါ။ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၁)ရက်မှစပြီး တစက်တစက်နဲ့ စလာပါတယ်။ OG ကိုပြတော့ အာထရာဆောင်း ရိုက်ရပါတယ်။...
စွန့်ဦးတီထွင်အောင်မြင်သူ အမျိုးသမီးတို့၏ အကျင့်ကောင်း ၁၀ ရပ်
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ (၁) တစ်ကိုယ်ရေ အားသာချက်ရှာဖွေခြင်း စွန့်ဦးတီထွင်အောင်မြင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ်ရဲ့အားသာချက်ကို သိနားလည်ပြီး အဲဒါကိုတန်ဖိုးထား ကြိုးစားကြပါတယ်။ တခြားသူတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ ကူညီကြပါတယ်။ (၂) အချိန်ဇယား ချမှတ်ခြင်း စွန့်ဦးတီထွင်အောင်မြင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ က နေ့စဉ်အချိန်ဇယားချမှတ်ပြီး...
မေး ။ သားအိမ်ထုတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက အရင်ကထက် စိတ်တိုလွယ်၊ ဝမ်းနည်းလွယ်၊ စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါလား။ နောက်ပြီး ဟော်မုန်းဆေးတွေ အမြဲစွဲသောက်ရလား၊ အရိုးပွရောဂါ၊ အရွယ်ကျတာတွေ ဖြစ်နိုင်သလား။ မိုးစက်(FB) ဒေါက်တာကျော်စွာဦး(ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။...